Cabañuelas, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्, के तिनीहरू सामान्य रूपमा ठीक छन्? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आज हामी मौसम क्षेत्रमा हुने पूर्वानुमानको एक विधिको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन ग्रामीण इलाकामा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ र त्यो दिनदिनै प्रासंगिक हुँदै गइरहेको छ। यो cabñuelas को बारेमा छ। शहरमा हुर्केका व्यक्तिहरूका लागि यो अवधारणा बढी अज्ञात छ। यद्यपि, ती मानिसहरु जो बस्ने वा देशमा बसोवास गर्छन्, यो शब्द वर्षको पहिलो महिनामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। र यो यो विधिहरूको सेट हो जुन बर्षको मौसमविज्ञान पूर्वानुमानमा मद्दत गर्दछ।
Cabañuelas आज पनि प्रयोग गर्न जारी छ र अधिक र अधिक सफल हुँदै गइरहेको छ। के तपाइँ जान्न चाहनुहुन्छ कि कसरी ती तयार पारिन्छन् र यस वर्ष २०१ for को भविष्यवाणी के हो?
1 Cabañuelas को उत्पत्ति
2 विशेषताहरु र भविष्यवाणी मोड
3 अगस्टमा Cabañuelas
4 २०१ñ को लागि Cabañuelas भविष्यवाणी
5 के cabañuelas सही हो?
6 Cabañuelas २०१-2016-२०१।
Cabañuelas को उत्पत्ति
काबासुएलाहरू दक्षिणी स्पेन र अमेरिकामा प्रयोग गरिन्छ। यसको उत्पत्ति प्राचीन बेबिलोनबाट आएको हो। मेक्सिकन सभ्यताले मायाको माध्यमबाट यो ज्ञान अपनाइरहेको थियो। दुबै पात्रोहरु १ 18 महिना र २० दिन सम्मिलित छन्। जनवरीको पहिलो १ days दिनमा, वर्षको महिना र बाँकी दुई दिनहरू अन्य घटनाहरूका बारे भविष्यवाणी गरिन्छ। जनवरी १ th को गर्मी अक्रान्त र जाडोको लागि २० औं पूर्वानुमान गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यो सम्भव भएको छ caba theuelas र अगस्टको पहिलो दिन बिचको सम्बन्ध। यी दिनहरुबाट हामी हावापानी घटनाहरु थाहा पाउन सक्छौं जुन बर्षभरि हुने छ। सबै स्थानहरू जहाँ cabañuelas राखिन्छन् उदाहरणको रूपमा अगस्त महिनाको पालना गर्दैन। उदाहरणका लागि दक्षिण अमेरिकामा उनीहरू मौसमको भविष्यवाणी गर्न जनवरी महिना प्रयोग गर्छन्। अर्कोतर्फ, हिन्दूहरूले मध्य जाडो महिना प्रयोग गर्छन्।
विशेषताहरु र भविष्यवाणी मोड
अधिक वा कम सही गणना गर्न प्रयोग विधि एकदम जटिल हुन सक्छ। तपाईंसँग पर्याप्त धैर्यता र राम्रो मेमोरी हुनै पर्छ यदि तपाईं यसलाई सही गर्न चाहनुहुन्छ भने।
हामी व्याख्या गरेर शुरू गर्दछौं id को cabañuelas। यो वर्षको पहिलो १२ दिनको मूल्याating्कनको बारेमा हो। तिनीहरूले हामीलाई वर्षको बाह्र महिनामा हुने मौसम बताउँदछन्। त्यो हो, जनवरी १ जनवरी जनवरी, फेब्रुअरी २ फेब्रुअरी, र यस्तै स indicate्केत गर्दैन।
अर्कोतर्फ, तिनीहरू छन् cabañuelas फिर्ता। यी जनवरी १ January देखि लाग्छ। तिनीहरू महिनाको मौसम पूर्वानुमान गर्न क्रममा प्रयोग गरिन्छ। त्यो हो, जनवरी १ December डिसेम्बर मा समय हुनेछ, अक्टोबर मा जनवरी १ 13, आदि। २th देखि जनवरी 13०, हामी हरेक दुई महिनाको मौसमको बराबरको बारेमा कुरा गर्नेछौं। त्यो हो, जनवरी २ जनवरी र फेब्रुअरी को महीना प्रतिनिधित्व गर्दछ, २ 15 मार्च र अप्रिल, आदि को महिना को बराबर हो।
त्यसोभए यो जनवरी on१ मा लिइन्छ र घट्दो क्रममा दुई घण्टा अन्तरालमा विभाजित हुन्छ। १२ देखि २ सम्म डिसेम्बर महिना हो, २ देखि November नोभेम्बर महिना, र यस्तै।
एक पटक जनवरी महिना पूर्ण रूपमा बितिसकेपछि, लिइएको प्रत्येक चरणको मौसम लिइन्छ र औसत बनाइन्छ। यो नतीजाले हामीले चाहेको महिनाको मौसमलाई सूचित गर्नेछ। उदाहरणका लागि, फेब्रुअरीको लागि मौसम पूर्वानुमान गर्न, यो जनवरी २ मा मौसम लाई ध्यानमा राख्नु पर्छ + जनवरी २ on मा मौसम + जनवरी २2मा मौसम + जनवरी 23१ को मौसम and देखि १० सम्म रातीमा ।
धेरैलाई यो विधि धेरै जटिल देखिन्छ। थप रूपमा, यसको वैज्ञानिक कठोरता छैन, किनकि जनवरी वा अगस्तको समयको बाँकी बर्षसँग कुनै सरोकार छैन। हामी लोकप्रिय परम्पराको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन कि पुरानो मानिसदेखि बनेको छ। जब मौसमविज्ञान थाहा थिएन वा यसमा मुश्किल उन्नत भएको थियो, मौसमको पूर्वानुमान गर्नका लागि क्याबाउलास एक राम्रो विधि थियो।
यो गर्न एउटा रोचक विधि हो र त्यसपछि जाँच गर्नुहोस्, वर्षभरि, तपाईंसँग सफलताको डिग्री। त्यहाँ अगस्त पनि छन् विधि समान छ, तर यो अगस्टमा गरिन्छ अर्को वर्षको भविष्यवाणी गर्न। तिनीहरू जारागोजा पात्रोमा आधारित छन्। अगस्त २ देखि डिसेम्बरदेखि जनवरीदेखि डिसेम्बरको पहिलो दुई हप्ताहरूमा हुने घटनाक्रममा उनीहरूलाई दुई अवधिमा विभाजन गरिएको छ, र अगस्त १ 1 देखि २ 13 सम्म, वर्षको दोस्रो आधामा के हुन्छ।
२०१ñ को लागि Cabañuelas भविष्यवाणी
यस विधि प्रयोग गरेर मौसम हिसाब गर्न समर्पित व्यक्तिलाई काबाउलिस्टा भनिन्छ। अगस्त २०१ 2017 मा, वाल्भर्डे डेल क्यामिनो (हुवेल्वा) का माध्यमिक र रसायन विज्ञान शिक्षक जुआन मनुएल डे लोस सान्तोसले २०१ 2018 को लागि आफ्नो भविष्यवाणी वर्णन गरे।
काबाउएलासले २०१ 2018 मा अत्यधिक खडेरीको पूर्वानुमान गरेको थियो र जनवरीको पहिलो दिनहरूमा वर्षाको कुनै सम्भावना नै थिएन। उनले चेतावनी दिए कि यो मौसम मौसमविद् हो भने सबैभन्दा खराब वर्ष हुनेछ। यो कुल शुष्क वर्ष थियो। यद्यपि हामी २०१ 2018 मा भएको महिनाहरूमा यस वर्ष वर्षा वास्तवमै प्रशस्त भएको छ। तिनीहरू यति मात्रामा पुगेका छन् कि स्पेनले 37 72% जलाशयहरू irs२ %मा पुन: प्राप्ति गर्न सफल भयो। त्यो भन्नु पर्ने हो, स्प्यानिश जलाशयको लागि औसत %२% छ।
अर्कोतर्फ, cabañuelas मा अर्को विशेषज्ञ बोलाइयो अल्फोन्सो कुएन्का धेरै फरक नतीजा उसको लागि वर्ष २०१ 2018 अत्यधिक वर्षा हुन गइरहेको थियो। त्यसोभए कुनचाहिँ सही छ? कुन हदसम्म कबाउएलास सत्य छन्? हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि ती पुराना विधिहरू हुन् र तीसँग कुनै वैज्ञानिक समर्थन छैन। त्यसकारण, यसको शुद्धता धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ।
के cabañuelas सही हो?
भविष्यवाणी गर्ने विधि प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिमा निर्भर गर्दै, एक नतिजा वा अर्को बाहिर आउँनेछ। यो सत्य हो कि यदि हामीले अल्फोन्सोको भविष्यवाणी गर्यौं भने, यो सहि हुनेछ, तर यदि हामी सान्तोसको चयन गर्दछौं, होईन।
सत्य यो हो कि cabñuela अधिक र अधिक प्रासंगिक हुँदैछ किनकि मौसम प्रणालीहरू अधिक पूर्वानुमान योग्य छन्। यो मौसम परिवर्तनको कारण हो। ग्लोबल वार्मि .्गले खडेरीको आवृत्ति र तीव्रता बढाउँदैछ, त्यसैले एक वर्ष सुक्खा हुनेछ भनेर पूर्वानुमान गर्न धेरै गाह्रो छैन।
वर्ष २०१-2016-२०१ our को लागि हाम्रो काबाउलिस्टा अल्फोन्सो कुएन्काले भविष्यवाणी गरेका थिए वर्षा धेरै थोरै प्रशस्त हुनेछ। केवल वसन्त र इस्टर मौसममा। वर्षको बाँकी धेरै सुख्खा हुनेछ। यस अवस्थामा, दुबै वर्षहरू सबैभन्दा न्यानो र सबैभन्दा सुखी रहेको थियो जुन वर्षा रेकर्ड गरिएको थियो।
यहाँ हामी यी दुई बर्षको लागि भविष्यवाणी क्यालेन्डर छोड्छौं:
म आशा गर्दछु कि तपाईंलाई कबाउएलासको बारेमा जानकारी मनपर्‍यो र २०१ of को लागि सम्पर्कमा रहनुभयो!
यदि तपाईं मौसमविद्हरूले मौसमको पूर्वानुमान कसरी जान्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
मौसमविद्हरू कसरी केही वर्षमा मौसमको पूर्वानुमान गर्न सक्षम छन्?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » नेटवर्क मौसम विज्ञान » भविष्यवाणी » Cabañuelas
होमियोपैथीको लेख कहिले?
PacoR लाई जवाफ दिनुहोस्